Barmụ nwoke Baruch - WRSP
1884 (September 24): A mụrụ Yehuda Alevy Ashlag na Warsaw, Poland.
1907 (Jenụwarị 22): Baruch Ashlag, nwa YA Ashlag, mụrụ na Warsaw, Poland.
1921: YA Ashlag kwagara Palestine na ezinụlọ ya.
1946 (August 31): Michael Laitman mụrụ na Vitebsk, Belarus.
1954 (October 7): YA Ashlag nwụrụ na Jerusalem na Yom Kippur ụbọchị.
1974: Laitman kwagara Israel na Soviet Union.
1979 (August 2): Laitman ghọrọ onye na-eso ụzọ Baruch Ashlag.
1991 (September 13): Baruch Ashlag nwụrụ na Bnei Brak, Israel.
1991: Laitman guzobere ụmụ Baruch dị ka ìgwè ọmụmụ na ụlọ ya na Bnei Brak.
1997: nemụ Baruch malitere ụlọ ọrụ mbụ ya. Laitman malitere redio redio kwa izu na redio Israel.
2001: Isi ụlọ Baruk kwagara Petah Tiqva.
2004: Laitman natara Ph.D. site na Institute of Philosophy nke Russian Academy of Science.
2007: nemụ Baruch malitere usoro ihe omume nke ọwa "Karma" kwupụtara na telivishọn nke Israel na nke dị na telivishọn nke Israel.
2008: Barmụ Baruch nwetara ọwa telivishọn nke ya na Israel, Channel 66.
2011: Arvut, onye na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ aka bụ Bnei Baruch.
2013: Beyachad, otu ndoro-ndoro ochichi nke umu akwukwo Bnei Baruch guzobere, putara dika ndi ndoro-ndoro ochichi nke ndi ochichi na Petah Tikva.
2014 (Jenụwarị 1): Isi ụlọ ọrụ Baruch kwagara n'ụlọ ọhụrụ, nke ndị otu ahụ nwere, na Petah Tiqva.
Na narị afọ nke iri na atọ, a na-akpọkarị otu akụkụ nke "amamihe oge ochie," ma nke bụ eziokwu, dị ka Kabbalah n'ụwa nile nke ndị Juu. Na otu narị afọ nke iri na atọ, nke kachasị ikike okwu nke Kabbalah, otu akwukwo a na-akpọ Zohar, [Foto dị n'aka nri] pụtara na Spen, ọ bụ ezie na a kpọrọ ya na narị afọ nke abụọ ndị rabaị ndị Juu, Shimon Bar Yochai. Na narị afọ nke iri na isii, Isaac Luria (1534-1572), onye Rabbi si Safed, mgbe ahụ, akụkụ nke Ottoman Siria, nke a makwaara dị ka "Ari" (ọdụm), pụta dị ka onye ntụgharị okwu kachasị dị na Kabbalah.
Na narị afọ nke iri na asatọ, ndị ụkọchukwu nke oge a bụ ndị sụgharịrị nsụgharị ndị Juu nke Enlightenment (Haskalah) siri ike katie Kabbalah. Ha weere ka Kabbalah dị ka ihe na-adabaghị n'ihe ha ghọtara dị ka nkwalite nke okpukpe ndị Juu. Ọ bụ ọdịnala nke ọdịbendị omenala nke mba ọhụrụ ahụ guzobere nke mba Israel mere ka ọ bụrụ àgwà enweghị atụ banyere Kabbalah. Onye ọkà mmụta sayensị kachasị elu nke Kabbalah, Gershom Scholem (1897-1982), si na Germany gaa Jerusalem na 1923 ma na-asọpụrụ ya. Otú ọ dị, Scholem kọwara Kabbalah dị ka ihe dị n'oge gara aga, ihe dị mkpa dị na ndị Juu chere na ọ bara uru nke ọmụmụ akụkọ ihe mere eme na mahadum, mana obere ntakịrị iji nye aka na omenala ndị Juu oge ochie. Scholem kere ụdị nke "mgbagwoju anya ndị Juu," dịka ihe na-azụlite ma na-eme ka ndị Juu dịrị n'otu n'ógbè ahụ mana ka ndị Juu na ndị Zionism na-enwu gbaa. Nke a bụ ndị ọtụtụ ndị kwenyere na, dị ka Kabbalah dị ka ọ dị n'oge gara aga, ọbịbịa ya nke oge ochie, mmeghachi omume na nkwenkwe ụgha, na enweghị ihe jikọrọ ya na Zionism na ndị ọchịchị. Ndị nna ukwu nke Kabbalah si na Eastern Europe, Northern Africa, na Yemen, si na Eastern Europe, ma ọ bụ ogologo oge ka a na-ejide aha ha na subculture ultra -thodox.
Otú ọ dị, ndị rabaị abụọ a ma ama na-akwalite echiche dị iche iche ma kwadebere ihe ga-emesị ghọọ mmalite nke Kabbalah na njedebe nke iri afọ nke iri abụọ. Abraham Yizchak Kook (1865-1935), onye ghọrọ onye isi nchịkwa Israel nke Israel, mejupụtara Kabbalah n'ime usoro ndị mba ndị Juu, ma kwusi ike ka Kabbalah kwekọrọ na Zionism. Yehuda Halevy Ashlag (1884-1954) biara Palestine site na Poland ma nyekwa otu nsụgharị nke Kabbalah ka ya na socialism kwadoro site n'echiche ya nke "ndị ọchịchị na-adịghị mma."
A mụrụ Ashlag [Foto na nri] na Warsaw na ezinụlọ Hasidic. O buru amụma na ọtụtụ ndị Juu ga-anọgide na ya Poland ga-anwụ, ma gbalịa ime ka ọgbakọ ndị Juu dị n'ógbè ahụ nwee ike ịkwaga Palestine tupu oge agafee. Ọbụna ndị njem si na Scandinavia nye iwu ka ha nwee ike ịhazi obere mkparịta ụka na Palestine, ebe ndị Juu Polish nwere ike ibi ma na-arụ ọrụ na tanning, ma mgbalị ya emeghị nke ọma. Ndị Ọtọdọks abụọ na ndị Juu nọ na Poland megidere atụmatụ ya. N'ikpeazụ, ọ kwagara Palestine nanị na 1921.
Ashlag nyere nkọwa ọhụrụ nke Luria's Kabbalah, nke gụnyere mmasị pụrụ iche maka nsogbu mmekọrịta ọha na eze. Ọchịchị Kọmunist pụtara, maka ya, na Kabbalah ga-emecha mee ka ụmụ mmadụ kwenye na ọ dị mkpa ịpụ site na ịchọ ọdịmma onwe ha n'anya na ịba ụba, si otú a na-ewulite ọha mmadụ na-enweghị isi. Omuma a, o jigidere, ga-enweta site na mgbanwe mmadụ karịa mgbanwe ọchịchị.
A maara Ashlag dị ka Baal HaSulam, "Onye nwe nwa," n'ihi na ọ bụ onye edemede nke Sulam, "Nwaanyị," nkọwa banyere Zohar. Ọ dekwara nkọwa dị mkpa maka ọrụ Luria, gụnyere "The Study of the Ten Sefirot" (Talmud Eser Hasefirot) na "Ụlọ nke Ọnụ Ụzọ Ámá Mmasị" (Beit Shaar HaKavanot), yana edemede edemede na isiokwu. Na Sulam, Ashlag kọwara ya Zohar dị ka nghọta ya banyere Lurianic Kabbalah si dị. Ashlag kwenyere na oge ngosi nke Kabbalah, nke zoro ezo ruo ọtụtụ narị afọ, mechara bịa. N'ime ọrụ Ashlag, e nwekwara ihe ngosi na oge eruola maka ịkụziri Kabbalah ndị na-abụghị ndị Juu, isiokwu nke ndị na-eso ụzọ ya ga-emepe.
Yehuda Ashlag nwụrụ na Yom Kippur Day na 1954. Dịka ọ na-emekarị na nzukọ ime mmụọ, ịdị n'otu nke otu ya anwụghị na ọnwụ ya. Ashlag hapụrụ ụmụ nwoke anọ, abụọ n'ime ha guzobere ụlọ akwụkwọ Kabbalistic wee lụọ ọgụ na esemokwu iwu banyere ikike nwebisiinka na ọrụ nna ha. Ha bụ Baruch Shalom Halevy Ashlag (1907-1991) na Benjamin Shlomo Ashlag (1910-1984). Ndị ọzọ na-eso ụzọ Ashlag gbasoro otu ezigbo ezigbo ndị nkuzi ha, bụ Yehuda Tzvi Brandwein (1904-1969), onye ghọrọ ọgọ nwanne Ashlag site na alụm di na nwunye nke abụọ ya wee guzobe ngalaba ọzọ. E nwere ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nke Ashlag ndị gbalịrị iguzobe otu ndị nwere onwe ha, mana ha nwere ihe ịga nke ọma.
Alaka Benjamin Shlomo ka bụ otu pere mpe. O guzobere seminarị na obodo Bnei Brak, nke akpọrọ Yeshivat Moharal. Mgbe ọ nwụsịrị, ọrụ ya na Bnei Brak gara n'ihu, iche, ụmụ ya nwoke bụ Simcha Avraham Ashlag na Yehezkel Yosef Ashlag, emesịa nwa nwanne ya, Yehuda Ben Yehezkel Yosef Ashlag, na onye na-eso ụzọ ya bụ Rabbi Akiva Orzel, onye isi nke Ateret Shlomo Lalọ Ashlag.
Banyere Brandwein, ka ọ na-aga n'ihu n'ọrụ Ashlag maka ịgbasa Kabbalah, ọ ghọrọ onye isi nke Office of Affairs Affairs maka na Histadrut, na Israel Labour Union, nke na-adaghị ịkpọlite ​​nku anya n'etiti ndị Ọtọdọks nke ochie. E kewapụrụ alaka ụlọ ọrụ Brandwein mgbe ọ nwụrụ na 1969 n'etiti ndị isi atọ dị iche iche. Ọnụ ọgụgụ ole na ole chọrọ idu ndú nke nwa ya nwoke, Rabbi Abraham Brandwein (1945-2013), bụ onye nanị mgbe e mesịrị na ndụ bịara ịnakwere ọrụ a. Ndị ọzọ soro Rabbi Feivel S. Gruberger, nke e mechara mara dị ka Philip Shagra Berg (1927-2013), [Foto dị n'aka nri] onye lụrụ nwanne nwanne okenye Brandwein, n'agbanyeghị na o mechara gbaa ya alụkwaghịm na 1971. Alaka Berg, duziri mgbe ọ nwụsịrị na 2013 site n’aka nwanyị di ya nwụrụ Karen na ụmụ nwoke abụọ, nwetara mba ụwa na-eso dị ka Kabbalah Center. Ọ ghọrọ onye ama ama mgbe onye na-abụ abụ bụ Madonna na ndị ọzọ Hollywood a ma ama sonyeere nzukọ ahụ.
Separatelọ ọrụ dị iche iche nke atọ nwere mgbọrọgwụ na nkuzi Brandwein bụ ọgọ ya Mordechai Scheinberger, onye ghọrọ onye isi obodo Or-Ha-Ganuz, nke dị na Galili. Ndị obodo bụ àjà ihe ọ -ụ -ụ na Ọtọdọks na-agụnye ọtụtụ ndị ọ bụrụ na ị chọrọ (ya bụ, ndị Juu na-abụghị ndị Juu ghọrọ ndị Ọtọdọks) ebe ọ na-anwa ime ihe Ashlag kwuru banyere “ọchịchị Kọmunist na-eme ebere.” Ọ na-arụkwa ọrụ kọleji nke ọgwụ a na-akpọ Elima, nke Rabbi Yuval HaCohen Asherov duziri, onye a ma ama na mpaghara ọgwụgwọ Israel ọzọ.
Maintù nke atọ nke mmegharị ime mmụọ na-agbaso nzọụkwụ nke Yehuda Ashlag sitere na nwa ya nwoke nke okenye, bụ Baruch Ashlag, nke a maara dị ka Rabash ma na-ewere ọtụtụ dị ka ezigbo onye ga-anọchi nna ya. Baruch biri nwa oge na Manchester, England, ebe ọ bụ otu n'ime ndị nkuzi nke onye Juu a ma ama na-enyere ndị mmadụ aka, Rabbi Solomon David Sassoon (1915-1985).
Mgbe ọ laghachiri Israel, Beruk [Foto dị n'aka nri] dugara ndụ dị umeala n'obi, na-ezi ìgwè nke ndị a họpụtara ahọpụta na Bnei Brak. N'ikpeazụ, site na ịmụ na ịkọwa ọrụ nna ya, ọ kwenyere na nkuzi bụ isi nke Yehuda Ashlag bụ na Kabbalah kwesịrị ịgbasa na okirikiri. Ọ malitere izi ihe n'ọtụtụ obodo yana ịgbasawanye ọrụ ya na ụlọ nzukọ ya na Bnei Brak. Isi onyinye Baruch nye Ashlagian Kabbalah bụ echiche bụ na a kacha kụziri Kabbalah ma tinye ya n'ọrụ n'otu ìgwè ụmụ akwụkwọ, site na mbọ ha na-enweta ihe ọ kpọrọ ogo inye onyinye. O kwusikwara ike na mgbanwe ime mmụọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-emetụta gburugburu ebe obibi, ma gbalịa ime ka nkuzi nna ya na "kọmitii na-enweghị atụ" kwekọọ n'ọnọdụ ọhụrụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Dị ka ọ mere na alaka ndị ọzọ, mgbe ọ nwụsịrị, ndị na-eso ụzọ ya kewara n'ime ìgwè dị iche iche. Ndị isi okpukpe Ọtọdọks nke obodo Baruch na Bnei Brak, gụnyere ndị lụrụ ụmụ nwanyị nna ha ukwu, gwara nwa Baruch, Shmuel Ashlag (1928-1997), ka o duo obodo ahụ. Shmuel bụ a ụcha, ya bụ onye ụlọ ikpe ndị Juu nyere ikike ka o gbuo anụmanụ maka nri n'ụdị iwu ndị Juu kwuru, ma rụọ ọrụ otu a na Argentina. Otutu umu akwukwo ekwenyeghi na Shmuel kwesiri ịnọchi Beruk n'ihi na obu nwa ya nwoke. Fọdụ soro Avraham Mordechai Gotlieb, onye guzobere Birkat Shalom Institute. Ndị otu Gotlieb gụnyere ọtụtụ ndị Juu ndị Ọtọdọks, na imirikiti ọ bụrụ na ị chọrọ. Ụlọ akwụkwọ Nehora na alaka ụlọ ọrụ Nehora Press, nke dị ugbu a n'okpuru nduzi nke Jedidah Cohen, na-eso ozizi Gotlieb ma gbalịa ịkpata Kabbalah gaa na ndị Juu na-ege ntị, ọ bụ ezie na Intanet. Ndị ọzọ mụụrụ Beruk ruo afọ ole na ole malitere ụlọ ọrụ ha na United States. Ha na-agụnye Fievel Okowita nke Ụlọ Akwụkwọ Kabbalah nke America, na Rabaị Aharon Brizel, bụ onye na-enye nsụgharị Hasidic n'ụzọ doro anya site na Ashlag Hasidut na New York. Ugboro ole na ole ndị na-eso ụzọ Barọk, gụnyere nwa nwunye ya Yaakov Moshe Shmuel Garnirrer, na Adam Sinai site na nzukọ ha HaSulam, na-anọgide na-akụziri Kabbalah na Israel ka obere ìgwè nke ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-ekpe okpukpe.
Mgbe Baruch nwụrụ, n'aka nke ọzọ, ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ya nwere usoro okpukpe ọdịnala. Michael Laitman akpọtala ọtụtụ ndị na Baruch, bụ ndị nwunye Beruch, Feiga na ndị okenye na-eso ụzọ nke Ashlag nke tọrọ, gụnyere ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ onye a họpụtara ka ọ ga-anọchi Rabash kwadoro. Ọ bụ Laitman bụ onye sitere na Isi Baruch.
A mụrụ Michael Laitman na Vitebsk, Belarus dị ugbu a, na August 31, 1946. A na-akpọ ya Rav ma ọ bụ Rabaị site n'aka ndị na-eso ụzọ ya dị ka aha dị nsọpụrụ, ebe ọ na-abụghị onye rabaị a họpụtara ahọpụta ma n'eziokwu adịghị eme dị ka otu site na-eduga ọrụ okpukpe. N'ụzọ na-akpali mmasị, nzụlite Laitman abụghị n'okpukpe kama na sayensị. Ọ mụtara Bio-Cybernetics na Russia, rụọ ọrụ na Institute Research Institute na Saint Petersburg, ọbụnakwa bidoro Ph.D. n'ọhịa a. Otú ọ dị, afọ ojuju ọ na-enwezi na azịza ndị sayensị nke oge a na-enye n’ajụjụ ndị kasị mie emi banyere ihe bụ́ nzube nke ndụ. Ọ nọrọ afọ abụọ na Lithuania dị ka refusnik (yabụ nwa amaala Soviet onye Juu nke ekweghị ka ọ kwaga Israel). O mechara nwee ike ịkwaga Israel na 1974. A na-akpọ ya Dr. Laitman na ndabere nke Ph.D. Ọ nwetara nzere na Russia na 2004 site na Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science.
Na 1976, Laitman malitere ịchọ azịza nye ajụjụ ya n'okpukpe, ọ bụ ezie na ya nwere mmasị na akụkụ "n'ime" ya karịa n'omume ndị ọzọ. Ọ mụtara na obodo Lubavitcher, Kfar Chabad, ebe mbụ ọ nụrụ banyere Kabbalah. O lere Kabbalah anya n'onwe ya na ndi nkuzi ole na ole. Ọ mụtakwara n'otu n'ime ìgwè Berg maka ọnwa abụọ, ma nata akwụkwọ abụọ nke onye isi nke Kabbalah Center, nke mere ka ọ ghara inwe afọ ojuju n'ihi ozizi nke Ọgbọ ọhụrụ. Mgbe ha nyochachara ụzọ ndị nkụzi ndị ọzọ na-eduzi Kabbalists, na njedebe, na 1979, Laitman chọtara Baruch Ashlag, bụ ndị n'oge isii nwere ụmụ akwụkwọ isii ma ọ bụ asaa na obodo Bnei Brak nke obodo Israel. N'ime afọ iri na abụọ sochirinụ, Laitman nọgidere na Beruk, na-ejere ya ozi ma na-amụ ihe ehihie na abalị na ìgwè ya, nakwa na nzuzo. Laitman nọgidere na-enwe mmasị n'ịmụ sayensị, ma na-ekwusi ike taa ruo otu onye na-ahụ maka ọkà mmụta sayensị Hungary bụ Ervin László.
Barmụ Baruch (“Smụ Barọk,” na-ezo aka na Baruch Ashlag) malitere na 1991, mgbe Baruch Ashlag nwụsịrị, dị ka otu ìgwè na-amụ ihe na ụlọ Laitman dị na Bnei Brak. N'ezie, dịka e kwuru na mbụ, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ Laitman abụghị ndị Juu Ọtọdọks. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị Juu ndị Juu sitere na Russia, ọnụ ọgụgụ ebe ọnụọgụ Ọtọdọks dị ala na akụkọ ihe mere eme. Ka o sina dị, ha gbalịrị ime mgbanwe maka ndụ na Bnei Brak. Ọnụ ọgụgụ ha toro, dị ka ndị ọzọ gosipụtara ọchịchọ nke ịmụ banyere okenye Ashlag na nwa ya site n'aka ezigbo onye na-eso ụzọ nke ikpeazụ dịka Laitman bụ. Ọganihu ahụ bịara na 1997, na ntanetị mbụ na mgbasa ozi redio mgbe e mesịrị. Thehazi usoro nke teknụzụ ọhụrụ n'ime afọ ndị na-esote gbanwere otu mpaghara ka ọ bụrụ mba ụwa, yana ndị otu ọmụmụ nọ n'ọtụtụ mba. E si na Bnei Brak kwaga isi ụlọ ọrụ gaa Petah Tikva, na mpaghara mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Tel Aviv. Mgbasawanye site n'iji teknụzụ eme ihe na-aga n'ihu na 2007, na mmemme TV nke Bnei Baruch na-agbasa site na telivishọn Israel. Na 2008, ụmụ Baruch nwetara ọwa nke ya, Channel 66, nke a maara dị ka "ọwa Kabbalah." Ọwa telivishọn abụọ a na-akpọ Kab.tv (nke na-agbasa ozi na TV) na Open TV, ụlọ ọrụ na-emepụta telivishọn a maara dị ka ARI Productions, yana weebụsaịtị www.kabbalah.info na www.kabbalahmedia.info, nke ikpeazụ bụ nnukwu ihe ndekọ nke vidiyo na ihe ndekọ ederede na ederede, na-anọgide ruo taa bụ ngwa ọrụ dị mkpa maka mgbasa nke ụmụ nwoke Baruch nke nkuzi Kabbalistic.
N'iji usoro ihe omuma mee ihe, Buch Baruch ka na-adabere na mmekọrịta nke Laitman na ụmụazụ ya, onye ọ na - akpọ "ụmụ akwụkwọ." Ọ ka na - akụzi kwa ụbọchị, ma ọ bụrụ na ọ na - eme njem, na Petah Tikva International Center.
Nye Laitman, Kabbalah na sayensị abụghị akụkụ dị iche iche, n'eziokwu Kabbalah bụ ọkwa kachasị elu nke sayensị maka oge anyị. Laitman na-ekwusi ike, megide nkọwa dị iche iche nke Yehuda Ashlag, na ọ kụziri na a ga-ekesara Kabbalah onye ọ bụla, gụnyere ndị na-abụghị ndị Juu. Na -ehota ihe odide nke Yehuda Ashlag, Laitman kwenyere na ekwesịrị ịkọwa ntụgharị aka banyere Israel na ndị Juu na edemede okenye nke Ashlag. Israel bu okwu ejikotara nebe inwe ochicho obi iru Onye Okike. Okwu ahụ bụ "Israel" bịara, Bnei Baruch na-akụzi, site na Yashar-El, n'ụzọ nkịtị "kwụ ọtọ n'ebe Chineke nọ," na-ezo aka ụmụ mmadụ n'ozuzu ha. Ma ndị Juu, mgbe Abraham malitere ịkpọ onwe ha Ndị Juu, Ndị Juu, bụ Laitman kwuru, si n'okwu ahụ Yichud (nke pụtara "ịdị n'otu," "ịdị n'otu"). Ya mere, onye Juu bụ, ya mere, ọ bụghị mba ma ọ bụ ihe ụwa.
Ọnọdụ Laitman nke ụwa na mgbasa nke Kabbalah bụ ntọala doro anya nke akụkọ ntolite. Abraham, Laitman na-akụzi, bụ onye Babilọn (ọ bụghị onye Juu) nke chọpụtara ụkpụrụ bụ isi nke Kabbalah na Babilọn. Mgbe ego ahụ malitere na nke mbụ ya na Babilọn, Abraham kpọrọ oku ka ụmụnne Babilọn jikọọ ọnụ banyere ya, na-eji usoro njikọ ọ chọpụtara (ya bụ, amamihe nke Kabbalah), mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gere ntị. Ndi ahu kpebiri iso Abraham bu ndi anakpo aha Israel mgbe ha choro ijidesi ike nke okike (ya bu na Onye Okike). Site na Abraham na “Israel” nke izizi ya malitere usoro nke ịgbadata na ịkpa oke na ịrịgo n’elu ya, na oge nrụrụ aka nke ịdị n’otu na-esochi mbọ mweghachi ya. Nke kachasi “mmuta” nke ime mmụọ ka ụmụ Israel nwetara n'oge nke Templelọ Nsọ nke Mbụ, mgbe ha jikọtara ọnụ karịa ndị otu ha n'ịhụnanya. Ọnọdụ ime mmụọ a wetara ihe ịga nke ọma n'akụkụ niile nke ndụ. Mana ọganiihu ime mmụọ na nke ihe mba Israel ezughi, ebe ọ bụ na dịka Ashlag si kwuo, nzube okike kwesịrị igosipụta na mmadụ niile. Ya mere, ndi Israel aghaghi ida site na oganihu ha di elu, nke mere na emesia ha na ndi mba ozo ga-alaghachi ma rute n'otu nke ime mmuo ha di elu karia oge a ikesara ya uwa nile.
Na ngwụcha oge nke Templelọ Nsọ nke Mbụ ndị Israel malitere ịda site n'ọkwa nke ịdị n'otu ha. Uto nke ego na enweghi ike igabiga ya na ihunanya nwanne mere ka ida site na ogo di elu nke Israel, nke mere ka mbibi nke ulo mbu na nke abuo. Mbibi nke ụlọ nsọ nke abụọ bụ oke iwe nke enweghị onwe ya na mba Israel. N'ihi nke a, ụmụ nwoke Baruch na-akụzi, mgbe emechara ederede nke Akwụkwọ Zohar, Shimon Bar Yochai nyere iwu ka ọ debe ya na nzuzo ruo mgbe mmalite nke ọgbọ ga-enwe ike iguzogide uto nke ego. Agbanyeghị, Luria, bụ onye mepere ọmụmụ Kabbalah maka ndị Juu niile, wee mechie oge ọhụụ nke ịrịgoro na oge nke nhicha ikpeazụ, wee mezuo na Yehuda Ashlag, onye meghekwara ya ndị na-abụghị ndị Juu.
Laitman na-ezo aka na nkuzi echiche Yehuda Ashlag, na ọ na-ahọrọ ịkpọ "ọchịchọ:" "ọchịchọ ahụ bụ mgbọrọgwụ nke uche ma ọ bụghị uche mgbọrọgwụ nke ọchịchọ." Ọchịchọ na-achịkwa ihe niile mmadụ na-eme, ma e nwere ọkwa dị iche iche. Uzo nke mbu gunyere mbu, ochicho nke aru, malite na ochicho nke ihe oriri na mmekorita nwoke na nwanyi. Nke abụọ abụrụ gbasara ego na akụnụba. Nke atọ, ike na aha. Nke anọ, ihe ọmụma. Elamụ mmadụ kọwapụtara ụzọ dị iche iche ha ga-esi na-anagide ọchịchọ ha, site n’imeju ha n’usoro ma ọ bụ site n’ịgbalị ibelata ọchịchọ ha.
N'inwewanye ihe onwunwe n'anya, ụwa dị obere ma na-erughị afọ ojuju na mmezu nke ọkwa anọ nke ọchịchọ. Ọchịchọ agaghịzi eju afọ. Ụfọdụ na-agbapụ mmanya na ọgwụ ọjọọ, ndị ọzọ daa mbà n'obi ma ọ bụ ọbụna gbuo onwe ha. Ọ bụ kpọmkwem site na nhụsianya na nsogbu nke ọkwa nke ise, ọchịchọ maka ọnọdụ ime mmụọ. O kwesịghị ịgbagwoju anya na ahụmahụ okpukpe. Ọ bụ kama ọchịchọ ịchọta azịza nye ajụjụ mmadụ kachasị mkpa: ihe bụ nzube nke ndụ anyị.
Ọchịchọ ọbụla na-abịa n'ụzọ nke ya. Usoro azu maka imeju uzo ise nke ochicho bu Kabbalah. Mgbe ọkwa nke ise na-enweghị ebe niile, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkụziri Kabbalah naanị mmadụ ole na ole. Ebe ọ bụ na anyị bi ugbu a n'oge ọchịchọ ime mmụọ na-etinyere na ụmụ mmadụ n'ozuzu ha, Kabbalah kwesịrị ịkọwa na kụziere ndị niile dị njikere ịmụta ya.
Ya mere, enweghi mmegide n'etiti oge nsogbu, ebe, dị ka Yehuda Ashlag dere, "isi ihe mkpụrụ obi bụ nke kachasị njọ," na ntoputa nke ọkwa nke ise. Nsogbu a n'onwe ya na-ebute ntoputa nke ọchịchọ ime mmụọ zuru ebe niile. Otú ọ dị, iji mezuo, ọchịchọ a kwesịrị ịmalite usoro abụọ. Nke mbụ na-eru ogo ya kacha elu: usoro nsogbu nke nsogbu ụwa niile na-akpata na enweghị ike izugbe. Nke abụọ a na-akpọ "mgbazi," echiche bụ isi na Kabbalah n'ozuzu ya na nkuzi nke ụmụ nwoke Baruch karịsịa. Mmekọrịta anyị na ndụ kwesịrị "imezigharị" site na ịwepụ ego na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na ịchọ ọdịmma onwe onye. Nke a bụ ogologo njem na gbagwojuru anya, ọ gụnyekwara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ohere ọhụụ mgbazi amalitela. Vingga site na ịchọ ọdịmma onwe onye gaa n'ọchịchị dị na obi nke Barba pragmat Kabbalah. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka o doo anya na ejiri ihe ọmụma, nke anọ, mee ihe kachasị mma kama ọ na-eme ka mmezu nke mmụọ, nke ise, nwee ike.
Ihe ndị ọzọ Baruch na-akụzi na-emetụta echiche nke "njikọ." N'elu, okwu anyị ejighi njikọ ma ọ bụ esemokwu, ọ bụghị site na ịhụnanya kama site na ịkpọasị. Otú ọ dị, ọ bụrụgodị na anyị enweghị ike ihichapụ ego ahụ, anyị nwere ike ijikọ n'elu ya. Anyị enweghị ike iwepụ esemokwu. Ihe anyị nwere ike ime bụ ịmepụta akwa n'elu ya ma wuo ọkwa ọzọ. N'okpuru, anyị na-ese okwu; n'elu, anyị ejikọrọ. Ụdị dị mma nke njikọ anyị, Laitman na-akụzi, bụ mkpụrụ obi nke Adam, bụ nke e kewara n'ime mkpụrụ obi 600,000 nke bụ mkpụrụ nke mkpụrụ obi mmadụ nile, ya mere e kere anyị n'eziokwu. Ijikọta na nkwekọ na ịhụnanya nke ọzọ na-eweghachi mkpụrụ obi dị otu a, a gosipụtara nke a na nụlite otu ọha na-akwadoghị na udo.
Laitman's Ashlagian Kabbalah abụghị ekweghị na Chineke. Ọ bụrụ na anyị jikọọ n'ụzọ ziri ezi, ọ na-akụzi, anyị na-achọpụta na njikọ dị n'etiti anyị ike na mgbasa nke pụrụ iche nke akpọrọ “ike dị elu.” Anyị nwekwara ike ịkpọ ya ike nke Chukwu. Ike a, Laitman na-akọwa, “bụ ike nke ìhè, ma ọ bụ ikike ụwa elu. A na-akpọ ya Azụ, Onye Okike, site n'okwu Bo Reh, bịa ma hụ, nke pụtara na mgbe anyị jikọtara, anyị na-achọpụta ma hụ ya. "
Laghachi azụ bụkwa akụkụ nke nkuzi Laitman ma jikọọ ya na ọchịchị Kọmunist na-enweghị atụ. Ọ kọwara, sị, "Anyị na-abanye n'ime oge na oge ọzọ, rue mgbe anyị rutere n'otu ebe ọha mmadụ" komunizim "ahụ batara na steeti ebe a na-etinye ya n'ọrụ site n'aka anyị n'ụwa. Nke a pụtara na anyị ga-ewulite ọha mmadụ kwụ ọtọ ebe ikike dị elu, nke bụ ike njikọ na ịhụnanya, nọ n'etiti anyị ma jikọta anyị, mgbe ahụ site na nke a anyị ga-enweta mgbazi zuru oke. " Laitman siri ọnwụ na agbanyeghị, na kọmunist Yehuda Ashlag ekwesighi inwe mgbagwoju anya na komunizim ndị Soviet, nke bụ naanị usoro ọchịchị aka ike nke nchịkwa dị anya site na "ezigbo" komunizim.
Enweghị ememe ndị dị na Baruch, bụ ndị na-azọrọ na ha bụ òtù ụwa. Ụmụ akwụkwọ ndị Juu na-ekpe ekpere na-eme nke a na Ụbọchị izu ụka, mana iche na nzukọ ndị isi. Dịka o mere maka òtù ndị ọzọ Kabbalah, ọ nwere ike ikwu na ịmụ na ịmụrụ ihe bụ omume ime mmụọ nke ụmụ Barọk. A na-edozi ihe ọmụmụ ndị a kwa ụbọchị na 3 AM na Central Petah Tikva, ma ndị ọzọ na ụmụ akwụkwọ ọ bụla na-esite na Intanet. Usoro ihe a na-ahụkebe emeela ka anya ndị nkuzi pụta ìhè, bụ ndị na-ekwusi ike na nsogbu ndị ahụ ga-arụ ọrụ n'ụtụtụ. Baruch na-aza na nkuzi na abalị bụ "omenala" omenala n'ụlọ akwụkwọ Kabbalistic, Baruch Ashlag na-eme ya n'onwe ya. N'ezie, omume ahụ dịkwa na ọdịnala ndị mọnk nke okpukpe dị iche iche.
Baruch [Foto dị n'akụkụ aka nri] bụ netwọk nke ụmụ akwụkwọ ndị ghọtara ikikere nke Michael Laitman dịka onye nketa ruru eru na onye na-anọchite anya Yehuda na Baruk Ashlag. Enwere ụfọdụ ndị ọrụ 100 oge nile na Petah Tikva, ebe ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ọrụ ọ bụla ma soro nkuzi kwa ụbọchị site na ịga na etiti ma ọ bụ site n'Intanet.
Nzukọ kwa afọ na Israel na-ezukọ na Tel Aviv Convention Center ihe dị ka ụmụazụ 8,000. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ìgwè ọmụmụ obodo dị na mba 107, yana ihe dị ka ndị na-esochi 50,000 mgbe niile na Israel na ụfọdụ 150,000 gburugburu ụwa, na-ekere òkè ma n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ site na nkwanye (ọnụ ọgụgụ nke 2,000,000 na-ekwukarị ma na-ezo aka na ndị ọbịa nke weebụsaịtị) E nweela mgbakọ obodo n’ebe dị iche iche, ya bụ, Meksiko, Tọki, Amerịka, na Rọshịa. A na-ahazi mgbakọ na ọmụmụ ihe site na mkpakọrịta na-enweghị uru akpọrọ Bnei Baruch-Kabbalah L'aam (Kabbalah for the People). Ndị mgbasa ozi Israel na-akpọkarị Kabbalah L'aam aha ọrụ ahụ.
Ọ bụ ezie na atụmatụ izugbe nke akụkọ ihe mere eme mmadụ na ntoputa nke ise nke ọchịchọ na-amalite echiche nke okenye Ashlag, Bnei Baruch gara n'ihu ịkọwa na anyị nọ n'etiti nsogbu mba ụwa kachasị njọ, nke gụnyere nsogbu ego 2008 na banyere n’oge ọhụrụ na 2011. Nsogbu ahụ metụtara Middle East site na nke a na-akpọ Arab Springs, yana Israel. Ọ chọrọ, Laitman kwenyere, mgbalị siri ike iji nye Kabbalah ọ bụghị naanị ndị mmadụ n'otu n'otu kamakwa ọha mmadụ. Ya mere, otu onye na-elekọta mmadụ na-elekọta ndị ọrụ nke Bnei Baruch a na-akpọ Arvut (Ọrụ Ndị Ọrụ) malitere na 2011. Arvut abụghị òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ọ na-arụ ọrụ site n'ọtụtụ ọrụ obodo iji mee ka esemokwu dị na Israel, na-akwalite ụkpụrụ nke ibu ọrụ, na-enyere aka ndị agadi na ndị ogbenye, na ịkwado ndị ntorobịa nwere nkà iji nwee ihe ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ na mahadum. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ Laitman na-arụsi ọrụ ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ndị otu Likud, ọ bụ ezie na n'etiti ụmụ akwụkwọ ụfọdụ na-amata ndị otu dị iche iche. Studentsmụ akwụkwọ Bnei Baruch guzobekwara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara a na-akpọ Beyachad (Ọnụ), nke sonyere na ntuli aka ime obodo nke 2013 na Petah Tikva. Beyachad bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị tozuru oke n'obodo ahụ wee họpụta ndị nnọchi anya anọ na Council Council. Ha ghọrọ akụkụ nke ndị mmegide ahụ, megide ọtụtụ ndị gụnyere ndị nnọchi anya nke otu dị iche iche.
Kabbalah n'ozuzu ya emeela ka ọtụtụ ndị na-ese akwụkwọ, ndị na-ese ihe, na ndị na-agụ egwú n'oge a. Ndị Baruch na-arụsi ọrụ ike na egwu nke egwu na ịgba egwu, ebe ọ bụ ndị a ma ama nke Israel, Russian, Ukrainian, Canadian, Croatian, and American performers, gụnyere Arkadi Duchin, Tony Kosinec, Rami Kleinshtain, na ndị agha Israel HaAharon (Ọgbọ Ikpeazụ). Na mgbakwunye na ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-agụ egwú, Ụmụ Baruch na-agụnye ndị na-ahụ ihe ngosi nke ọrụ ya sitere n'ike mmụọ nsọ. Otu onye na-ese ihe dị otú ahụ bụ Zenita Komad, bụ onye nwe obodo ọstrịa, onye ọrụ ya gụnyere ma akara abụọ nke Kabbalistic na ihe atụ sitere n'aka Yehuda Ashlag na Laitman. E gosipụtara ihe osise ya na nrụnye na-eduzi veranda na Vienna na n'ebe ndị ọzọ
Na akwukwo akwukwo karia ihe anya, ekwuputara otu echiche na ihe omuma nke Jeff Bogner Onye Egotist, njem nke njem site na ndụ nke a na-eme ka ọha na eze na New York dị ka Kabbalah, site n'okpuru ruo n'elu, site n'ikuku na inye onyinye, na ihe atụ nke akwụkwọ edemede nke Bnei Baruk dere. Ihe atụ ọzọ dị otú ahụ bụ akwụkwọ akụkọ ahụ Kabbalist, nke Semion Vinokur dere, ụmụ akwụkwọ Baruch na onye nduzi nkiri nke meriri otu Israel Film Academy Award na 1999. Akwụkwọ "cinematic" a, nke e dere n'asụsụ Russian ma sụgharịa ya n'asụsụ dị iche iche, na-akọ akụkọ banyere Yehuda Ashlag na ọkpụkpụ akụkọ na-egbu oge.
Ọ bụ ezie na Israel nwere mbụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na 1974, karịsịa na-atụ aro otu ije si India, Divine Light Mission, mgbalị ndị ọzọ maka iwu kpọmkwem megide "cultures" mgbe ihe ịga nke ọma. A maliteghachiri ha na 2015, mgbe a kwusịrị rabbi Elior Chen na onye na-ahụ maka otu nwanyị bụ Goel Ratzon maka ikpe mkpegbu dị egwu maka ịgba ohu, mmeko nwoke, na mmejọ ụmụaka na 2011 na 2014.
Dị ka 1992, ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze bụ Nurit Zaidman-Dvir na Stephen Sharot (1992) hụrụ otu ihe pụrụ iche nke òtù ndị omempụ nke Israel: "N'adịghị ka obodo ndị ọzọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ, a malitelarị mmemme ndị na-arụ ọrụ kachasị na Israel. ndị okpukpe na òtù dị iche iche na-eme nke ọma, karịsịa ndị ultra-Orthodox. Òtù ndị na-ahụ maka ọdịnala n'Izrel na-ekere òkè na òtù ndị na-emegide òtù nzuzo na òtù dị iche iche na ndị mmadụ n'otu n'otu, ha na-ekwutọkwa dị ka òtù ndị "òtù ndị ọgọ mmụọ" dị ka ịdọgbuo ndị Juu pụọ n'okpukpe ndị Juu ma ọ bụ ịbụ ndị na-abụghị ndị ọzọ.
Ndi nkuzi nke ndi Israel na-akatọ Baruch n'ihi na ha bu "ndi ozo" ma na-akuko Kabbalah. Ikwu okwu megide ndị Baruch na ndị mgbasa ozi nke Israel bụ ụmụ akwụkwọ anọ anọ, nna nke nwa akwụkwọ mbụ, onye bụbu nwunye nke nwa akwụkwọ, na onye ndú nke òtù ndị omempụ nke Israel kacha ukwuu. Ha nyere ndị nnọchiteanya n'okwu ikpe gbasara otu n'ime ha, degaara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma bipụtara isiokwu ndị iro na abụọ na mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ.
A na-ebo Baruch ebubo na ọ bụ ụdị mmadụ nke na-egosipụta onye ndú ya, nke na-emepụta ihu igwe ebe ụmụ akwụkwọ kwụsịrị n'ezinụlọ ha na ịhapụ ọrụ na ohere ọrụ, ịnọgide na-ejide ụmụ akwụkwọ ya, na nkewapụ ụmụ akwụkwọ si ọha mmadụ. Ndị nkatọ na-ekwukwa na ìgwè ahụ na-emegharị ndị òtù site na ịchọrọ onyinye ego oke ego.
Arụmụka ndị a abụghị nke mbụ ma n'ezie bụ otu akụkụ nke usoro mgbochi usoro ọgwụgwọ nke imirikiti ndị otu akpọrọ "ndị otu nzuzo" ma wakpoo ha site na iji ndị otu ndị otu emejọla dị ka isi iyi. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ nakweere echiche nke "òtù nzuzo" nke ndị na-emegide òtù nzuzo kwuru, Otú ọ dị, ụmụ nwoke Baruch agaghị arụ ọrụ. Ọ naghị egosi “ntụgharị” okpukpe site n’otu okpukpe gaa n’ọzọ. A na-ekesa ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile, bụ ụmụ Baruch na ihe mmụta ha n'efu. Isi ego ya bụ otu ụzọ n'ụzọ iri, n'agbanyeghị na ọ bụghị ụmụ akwụkwọ niile otu ụzọ n'ụzọ iri na ndị na-anaghị anabata iwu n'ụzọ ọ bụla. A katọrọ omume a mana ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst. Inye otu ụzọ n'ụzọ iri bụ ihe a na-asọpụrụ oge niile n'ọtụtụ ụka Protestant na ọ bụ omume bụ isi na Chọọchị nke Jizọs Kraịst nke Ndị Nsọ nke Ikpeazụ.
N'akụkụ ime mmụọ niile, a na-ewere ndị isi, na ọkachasị ndị guzobere ya na nsọpụrụ dị ukwuu. N'ime ụmụ Baruch, agbanyeghị, ọ nweghị oke ofufe nke onye ndu. A naghị ewere ihe odide Laitman dị ka iwu, n'adịghị ka Zohar na nkọwa ya site n'aka Yehuda na Beruk Ashlag. Teachingzọ nkuzi Laitman na-akpọkarị uche gaa na ihe ọ kpọrọ "usoro," nke na - esite n'ihe odide nke ndị nkuzi ya, ọ bụghị n'onwe ya ma ọ bụ ederede nke ya.
Studentsmụ akwụkwọ na-eleghara nkwutọ nke Laitman “na-ekwupụta” nhọrọ ha n'okwu dịka ọrụ, alụmdi na nwunye, na ịgba alụkwaghịm, n'agbanyeghị na ha kwenyere na ha nwere ike ịjụ ya ndụmọdụ n'okwu nke aka ya. Karịsịa, ha kwenyesiri ike na ọ na-akpọ ụmụ akwụkwọ ka ha hapụ ọrụ ka ha nwee ike itinye ndụ ha na ụmụ nwoke Baruch. Ihe odide Laitman kwusiri ike uru ọrụ bara. Ọ na-arụ ụka na onye na-anaghị arụ ọrụ ma si otú a na-enweghị ike igbo mkpa ezinụlọ ya, na-emebi ụzọ ime mmụọ ya. A gwara ụmụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị otu na-arụsi ọrụ ike na ọha mmadụ, na-atụ ụtụ isi, na-eje ozi na ndị agha, na-achụso ọrụ, na itinye ego na ezinụlọ ha.
Akụkụ ọzọ nke nkatọ metụtara ụmụ nwanyị. Mụ nwoke na ụmụ nwanyị kewapụrụ n'oge nkuzi abalị (ọ bụ ezie na ọ bụghị na nkuzi ma ọ bụ nkuzi ndị ọzọ), ebe ụmụ nwanyị na-esote nzukọ site na ụlọ dị iche. Maka nke a na ihe ndị ọzọ a boro ụmụ Baruch ebubo na ọ bụ nna ochie na ịkpa oke maka ụmụ nwanyị, nkatọ a nụkwara megide ndị otu Kabbalah ndị ọzọ, Hasidic Judaism, na Ọtọdọks nke ndị Juu n'ozuzu. N'eziokwu, ọhụụ nke nwanyị n'oge ochie nke Kabbalah, gụnyere ọrụ nke Yehuda Ashlag, bụ ihe ọdịnala ụfọdụ, na omume nkewa n'oge nkuzi bụ ihe a na-ahụkarị na ndị Juu nke ndị Juu. Otú ọ dị, nke a, na-ebelata mgbe ụfọdụ ka ọ bụrụ naanị ihe esemokwu dị na ajụjụ ọnụ nke ụfọdụ ndị bụbu ndị agha. Ha na-ekwu na Laitman gbara ndị di ume ka ha na-etinyekarị uche na ndị nwunye ha “ihe karịrị nkeji asaa nke nlebara anya kwa ụbọchị.” A na-ahụta nke a dị ka ụmụ akwụkwọ nke ụmụ Baruch. Ọrụ ndị Laitman na-ekwusi ike bụ uru alụmdi na nwunye, ezinụlọ, mmekọrịta dị mma n'etiti di na nwunye. Laitman chịkọtara ọtụtụ nkuzi na mmụọ nke Ashlags banyere mkpa mmekọrịta dị n'etiti di na nwunye dị, nke a bụ n'ezie okwu ugboro ugboro na nkuzi ya. Ọ na-ekwukwa dị ka ihe atụ mmekọrịta ya na nwunye ya, na eziokwu na ọ na-eso ya agagharị n'ụsọ oké osimiri ma ọ dịkarịa ala otu elekere kwa ụbọchị ma na-aga ezumike ezinụlọ ọ dịkarịa ala ugboro atọ kwa afọ. Ebumnuche Laitman banyere ụmụ nwanyị dị anya site na nwanyị dịka a ghọtara na ọdịbendị nnwere onwe nke narị afọ nke iri abụọ na otu. Ma ha anaghị akwalite mmegbu ma ọ bụ ịkpa ókè nke ụmụ nwanyị, ma ọ bụ nke idina ụdị onwe. N'ezie, onye nwe ụlọ akụkọ ihe mere eme na Tel Aviv akụkọ ihe mere eme bụ Evita, Shay Rokach, bụ onye amaara LGBT na Israel na nwa akwụkwọ nke Bnei Baruch. Na òkù ya, Laitman kwuru okwu na 2011 na Gay Center na Tel Aviv.
Nkatọ nke ndị Barọk kwesiri ka a ghọta ya dị ka akụkụ nke mmeghachi omume nke Israel nke agha "agha ndị agha na Europe na America" ​​n'oge na-adịbeghị anya. Ndị na-emegide ndị na-emegide onwe ha na-etinye aka na Boị Baruch ebubo nke ịchọta ụbụrụ na ịchọrọ uche na "agha" nke Margaret Singer (1921-2003) na ndị ọzọ na-emegide ndị na-eme ka ndị na-emegide onwe ha, ma ndị ọkà mmụta agụmakwụkwọ bụ isi na-akatọ òtù okpukpe ọhụrụ. N'okwu a, a na-azọrọ na a gwara ụmụ akwụkwọ ka ha banye "iwu" siri ike (takanon) nakwa na a na-ezobe ụfọdụ ozizi ma na-ekpughere naanị ndị otu nchịkọta ahọpụtara. Ụmụ akwụkwọ na-agọnahụ nke a, na nchọpụta ụlọ akwụkwọ banyere ụmụ Barọk adịghị achọta ihe àmà nke ebubo ndị a. N'aka nke ọzọ, esemokwu Israel banyere ụmụ Baruch na-agafe ọdịnala nzuzo nke òtù nzuzo ma bụrụ akụkụ nke mgba maka Kabbalah.
Kabbalah abanyela n'ọtụtụ nkọwa dị iche iche. Enwere ike ịkọwa ha dị iche iche: agụmakwụkwọ, okpukpe, esoteric, na pragmatic. Nkọwa nke agụmakwụkwọ na ọdịnala nke Scholem, onye onye nnọchi anya ya n'oge a bụ Moshe Idel, gbalịa ịzigharị nsụgharị Kabbalah kacha ochie site na ịmụ akwụkwọ. Ha na-akatọkarị ịkọwa ihe a na-eme n'echiche. Maka ha, nke abụọ a na-eme ka usoro ihe odide na ọdịnala dị mgbagwoju anya dị mfe, ma na-eweta nghọta pụtara otu ihe na-emegiderịta onwe ha ma na-emegiderịta ibe ha. Nkọwa nke okpukpe na-ekwusi ike na Kabbalah nwere njikọ chiri anya na iwu ndị Juu yana akụkụ nke okpukperechi, okpukpe ndị Juu. N'ime ụfọdụ nkọwa ndị a, ọ bụ ezie na ọlị n'ụzọ niile, Kabbalah bụ n'ezie ọdịnaya nke okpukpe ndị Juu. Maka ndị na-akwado nkọwa okpukpe, ịkụziri Kabbalah ndị na-erughị eru enweghị isi, na ịkụziri ya ndị na-abụghị ndị Juu bụ ihe arụ.
Nkọwa nke Esoteric kwuru site n'aka ndị mgbaasị dị ka Madame Helena Blavatsky (1831-1891), onye isi nhazi nke Theosophical Society, na ndị guzobere Ụkpụrụ Hermetic nke Golden Dawn. Ha kwadoro ihe odide Kabbalistic ma gụọ ha site na anya nke usoro ha.
N'ụzọ dị iche, nkọwa ntụgharị uche dịka Bnei Baruch na-agọnahụ na Kabbalah bụ akụkụ nke okpukpe ma ọ bụ nke usoro esoteric nyere. Kabbalah maka ha bụ azịza nye ọchịchọ ime mmụọ miri emi nke mmadụ. Dika odi, enwere ike ịkụziri ya ndị okpukperechi niile ma ọ chọghị ntụgharị na okpukpe ndị Juu ma ọ bụ idebe iwu ndị Juu. Ọ bụ ezie na ndị isi nke Kabbalah pragmat anaghị eleghara akwụkwọ agụmakwụkwọ anya, ha na-achọ ịdị n'otu, ịdị mfe, na ezigbo ndụmọdụ ime mmụọ ebe ndị ọkà mmụta na-ekwusi ike banyere mgbagwoju anya, mmegiderịta, na tiori.
Mgbalị maka Kabbalah n'etiti mmeghe okwu anọ a abụghị ihe efu. N'ime usoro ahụ, echiche nke Kabbalah bụ ọha mmadụ na-ewu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwurịtara. Okwu nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke ya. Esemokwu fọrọ nke nta ka a pụghị izere ya. Ndị okpukpe na-eme ka hà nwere ikike ịkọwara Kabbalah dịka akụkụ nke okpukpe ndị Juu na-ahụ ugbu a na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ime ka ọnọdụ ha dịkwuo ike site na ịkọ aha dị ka "pragmatic" nke na-abụghị okpukpe nke Kabbalah, nke ndị Baruch bụ ihe nlereanya kachasị mma. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Kabbalah na ndị ọkà mmụta nke okpukpe tụnyere, ndị na-enweghị ọmịiko maka usoro pragmatic, nwere ike inye aka kpatara okwu ọjọọ. Ọbụna ndị ọkachamara dị iche iche nwere ike ịchọta mmasị na ịkwado pragmatic Kabbalah dị ka asọmpi na ụdị nke nkuzi Kabbalistic.
Ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ịhụ esemokwu a dị ka ihe kpatara echiche efu ma ọ bụ ihe ọmụma kpatara. Mgbalị iji "nwe" Kabbalah bụ nnukwu mgba maka ike. Okpukpe na, ruo n'ókè ụfọdụ, otu ìgwè dị iche iche na-enwe mmasị n'ịkwado ike ha, site n'igosi na echiche ọha na eze na nnukwu anabatara ọrụ nke onwe ha dị ka naanị ndị na-elekọta nke nkọwa "ezigbo" nke ihe Kabbalah bu.
Image #1: Ntugharị si Library nke Congress nke peeji nke mbụ nke Zohar, Mantua, 1558.
Image #2: Foto nke Yehuda Halevy Ashlag. A makwaara ya dị ka Bel HaSulam, "Onye nwe ya," n'ihi na ọ bụ onye dere Sulam, "Ladder," nkọwa banyere Zohar.
Image #3: Foto nke Philip Shagra Berg (1927-2013), nke a na-akpọ Feivel S. Gruberger. Berg guzobere Kabbalah Center.
Image #4: Foto nke Baruk Ashlag, onye na-eso Yehuda Ashlag.
Image # 5: Foto nke Michael Laitman, onye guzobere ma na-eduzi Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute. Laitman bụ nwa akwụkwọ Baruch Ashlag.
Foto #6: Ntugharị nke logo ndị Baruch.
Ben Tal, Shai. 2010. "Bnei-Baruch - Akụkọ nke Ọhụrụ Okpukpe." Akdamot 25: 148-67 [Hibru].
Ụmụ Baruch. 2008. Kabbalah maka Onye Mmụta. Toronto, Ontario na Brooklyn, NY: Ndị na-ebipụta akwụkwọ Laitman Kabbalah.
Bogner, Jeff. 2014. Onye Egotist: A Memoir. Toronto, Ontario na Brooklyn, NY: Ndị na-ebipụta akwụkwọ Laitman Kabbalah.
Huss, Boaz. 2015. "Kabbalah na Nweghari nke ya." Pp. 8-18 na Kabbalah na Sufism: Echiche na Omume Esoteric in Judaism and Islam in Modern Times - Nzukọ 8th Annual CISMOR na nchọpụta ndị Juu (Kyoto: Center maka Ọmụmụ Akwụkwọ Interdisciplinary banyere Religious Religions [CISMOR], Mahadum Doshisha).
Komad, Zenita. 2015. ANYỊ: Artist, The Kabbalist, na CircleXperiment. Toronto, Ontario na Brooklyn, New York: ARI Ndị nkwusa.
Myers, Jody. 2011. "Kabbalah maka ndị Jentaịl: Mkpụrụ obi dịgasị iche iche na nke ụwa na Kabbalah dị ugbu a." Pp. 181-212 na Kabbalah na nkwalite ime mmụọ nke Contemporary, nke Boaz Huss depụtara. Beer-Sheva: Mahadum Ben-Gurion nke Negev Press.
Persico, Tomer. 2014. "Neo-Hasidism & Neo-Kabbalah na Israel nke oge ime mmụọ: ịrị elu nke Onwe Onye Na-enyere Aka." Mgbanwe Ime Mmụọ na Okpukpe 5: 31-54.
Vinokur, Semion. 2012. The Kabbalist: A Cinematic akwụkwọ. Nsụgharị Bekee. Toronto, Ontario na Brooklyn, NY: Ndị na-ebipụta akwụkwọ Laitman Kabbalah.
Zaidman-Dvir, Nurit na Stephen Sharot. 1992. "Nzaghachi nke Òtù Na-ahụ Maka Okpukpe Ọchịchị Israel: ISKCON na Teshuvah," Akwụkwọ akụkọ maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe 31: 279-95.